Microsoft Inoburitsa Microsoft Office 2019 Ongororo yeMac yeVashandisi Vemabhizinesi | Ndinobva mac
Microsoft Inoburitsa Microsoft Office 2019 Ongororo yeMac yeVashandisi Vemabhizinesi
Shanduro yekupedzisira yevatengi isati yaonekwa gore rino, Microsoft yakatoburitsa iyo Microsoft Office 2019 Kuongorora kweVashandisi Vemabhizinesi Vachishandisa Mac. Iyi vhezheni itsva ichapa mashandiro matsva kune avo vachiri vasingashinga kushandisa iyo yegore-based vhezheni, iyo inonzi Hofisi 365.
Vashandisi veWindows vane account yekambani kare unakidzwa neiyo Hofisi 2019 Ongororo kubva muna Kubvumbi apfuura. Nekudaro, makambani mazhinji uye akawanda ari kushandisa Mac muzvikamu zvavo uye ndosaka Microsoft yanga ichidawo kupa iyi Ratidziro kuvashandisi venhoroondo iyi.
Sezvo ivo vachitaura kubva kuchiziviso chekambani chaicho, vhezheni yekupedzisira yevatengi -vose veWindows neMac ichaonekwa pachiitiko imwe nguva muhafu yepiri yegore rino 2018. Kunyangwe zuva chairo risati rapiwa. Mune ino Ongororo, vashandisi vanozokwanisa kuverenga pane arsenal yese yezvishandiso zvinosanganisira inonyanyo kufarirwa hofisi chishandiso chenguva dzese. Izvi zvinoreva kuti tichava ne: Shoko, Excel, PowerPoint, Outlook uye OneNote.
Pakati pekuvandudza kwakanyanya kunogona kutarisirwa pane iyi vhezheni nyowani yatichava nayo muShoko, semuenzaniso, nzira nyowani isina zvinovhiringidza —Mafungiro Ekutarisa—. Saizvozvo, iro duramazwi rinobatanidza kunyorera rakagadziridzwa, pamwe neyemhando yakasviba kana nyowani "Rugwaro -kutaura". Kana iri yeExcel, isu tichawana mukana wekusanganisira mamepu e2D, machati efanera, pamwe nemabasa matsva CONCAT, TEXTJOIN, IFS, CHINJA.
Kana zviri zveAptlook tinowana "Tumira gare gare" basa kana iyo kukwanisa kuburitsa 4k mavhidhiyo muPowerPoint kana mukana wekuswededza pane iwo masiraidhi mukati mehurukuro. Saizvozvo, kana iwe uchifarira kuyedza iyi Ratidziro yeHofisi 2019 yeMac uye uri mushandisi webhizinesi, iyo kambani ichagadzirisa mashandisiro ayo kana iwe ukanyoresa kuburikidza Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Microsoft Inoburitsa Microsoft Office 2019 Ongororo yeMac yeVashandisi Vemabhizinesi
C Spire neUS Cellular vatove vanopa kubatana kweApple Watch LTE
Apple inoshandira Broadcom Vhidhiyo uye Viacom Executive yayo yekushambadzira vhidhiyo sevhisi